Voafidy i Maorisy fa i Madagasikara aiza ho aiza? – Malag@sy Miray
Natao ny alarobia 7jolay lasa teo ny fanomezana ireo amboara isankarazany ho an’ny faha -17n’ny World TRavel Awards Africa & Indian Ocean. Maorisy no firenena voalaza fa nahazo izany amboara izany ary AIR MAURITIUS kosa no tamban-jotram-pitanterana nahazo ny amboara natokana ho an’ireo mpitatitra. Marihana fa Air Mauritius no lany raha ny mpifaninana taminy dia tsy iza fa AIR FRANCE, AIR MADAGASCAR, SOUTH AFRICAN AIRWAYS, AIR AUSTRAL ary AIR SEYCHELLES.
Fanamarihana tiana atao kely fotsiny dia tsy tena afa-po loatra ny tena noho ireo fahatarana maro mitranga ao amin’ny Aeroportn’ny Ramgolaan ao Maorisy… saingy fantatra kosa fa orinasa sy vondronasa 183000 no nifidy nahatonga izany vokatra azo izany. Raha ny fantatra ary hita sy tsapa dia maro ireo mpiasa amin’ny hotely sy toeram-pisakafoanana ary toerana fandraisam-bahiny sy fivarotana maorisianina no tena mahafa-po tokoa raha ny fandraisana no lazaina. Indraindray mampiahotra satria dia toa tena « manompo » tokoa izy ireo. Fatra-panaja sy mihaino izay ilaina sy tadiavin’ireo mpanjifa.
Malahelo ny tena rehefa miresaka momba an’i Madagasikara satria dia mifanohitra amin’izany no miseho. Misy ireo mpiasa amin’ny toeran fandraisam-bahiny isankarazany no tsy dia manaja mpanjifa, toa tsy ampy fiofanana na tsy ampy fanajana ny fijery azy, misy mikitakita indraindray rehefa mba miteny izay tsy mahafa-po ianao. Ary misy mampiandry anao, tsy mijery mihitsy rehefa tonga eo anoloany ianao. Raha ny hadio sy ny hatsaran’ny toerana ihany koa dia rehefa latsaky ny kintana 3 izy ireny dia mampitahotra indraindray, miepaka ny rindrina, maloto ny toerana fidiovana, rovitra ny lambam-pandriana toa sanatria hotely fijangajangana izy ireny. Hita izany any Toamasina, any Toliara, any Fianarantsoa, any Antsirabe, any Moramanga, any Ambatondrazaka, any Nosy Be, sns. Ny toerana sasany kosa indray dia raha vao tsy manana endrika vazaha ny tena dia ilan’ny « sécurité » vaniny fa tsy tokony hiditra angaha?
Raha ampitahaina amin’ny toerana manodidina ny ranomasimbe Indianina izany dia La Réunion no manakaiky izany fandraisana malagasy izany saingy ny trano sy ny fanaka tsara lavitra. Raha ny ao Afrika atsimo no asiana teny dia mahagaga ny malagasy ny mahita ireo mpiasa mandray mitsiky matetika, manaja olona ary miarahaba sy manontany hatrany amin’izay ilaina sy atao anao. Tsy afaka manambara ny any Mayotte sy Comores ny tena fa ireo aloha no afaka ampitahaina. Seychelles kosa ambarako afaka fotoana vitsivitsy.
Raha ny momba ny orinasa mpitatitra an’habakabaka no resahina dia AIR FRANCE no mahafinaritra ny tena noho ny zavatra atolony sy ny fandraisana ataony. Samy manana ny azy ny solon-tsaina sy ny fandefasampeo sy sary ary afaka misafidy izay tiany hatao na lalao na hijery sinema. Vao nisy fanatsarana ihany koa ny fandaharana misy sy alefa roa taona lasa izay. AIR MAURITIUS dia misy ireo zavatra ireo saingy dokam-barotra no tena betsaka alefany ao, indrindra fa ny mampitohy an’i Maorisy sy Madagasikara. Soa fa tsy dia tena ohatra izay loatra ny azy rehefa mandeha lavitra ianao. AIR MADAGASCAR kosa dia tsara fandraisana saingy dia tsy dia afaka misafidy loatra izay fialam-boly eny ambony eny ianao fa izay alefany eo ihany no ifaliana. Indrindra fa ho an’ny zotra anatiny dia miandry fotsiny ny fotoana ahatongavana eo am-pitsakoana vatomamy sy voanjo izay atolony.
Resaka fizahan-tany ny resaka ary izay no hanohizana ny toraka atao eto. Antananarivo dia lasa fandalovan’ny vahiny satria tsy misy ranomasina no tsy dia ampy atao. Efa nisy ny ezaka ifandombonanan’ny ORTANA sy ny OTM ary ny Ministera momba izany saingy maro no mitady gidro sy ranomasina ary Tsingy… Voalaza fa mba nahazo tombiny kely tamin’ny Fiadina ny Amboara eran-tanin’ny Baolina Kitra i Madagasikara saingy tsy dia tena hita tsy tsapa eny amin’ny fivezivezena rehetra eny. Mety any amoron-tsiraka angamba no tena alehan’ireo olona ireo.
Misy betsaka azo atao hanatsarana ny fizahan-tany eto amintsika. Eo aloha ny FHORM sy ireo fikambanana isan-karazany toan’ny GO tO Madagascar sns. miezaka hatrany manofana sy mifampizara traikefa amin’ireo mpikambana eo aminy saingy misy toe-tsain’ny mpiasa eto an-toerana mihitsy no mbola mila arenina mafimafy noho ny fitiavam-bola na ny tsy fanajana vahiny na ihany koa noho ny fahenarana diso tafahoatra loatra.
Tsy mandreraka re tompoko ny fiarahabana amim-panajana, ny fihainoina amim-paharetana izay tadiavin’ny mpanjifa, ny fisaorana, ny fanaovana veloma amin’ny fomba mihaja fa indrindra indrindra ny fitsikina. Tsy mahafaty ny madio sy ny manaja ny fahadiovana amin’ireny toeram-pisana sy toerana fandraisam-bahiny ireny. Tsy mahareraka ny manao ara-dalana ny asa sy ny andraikitra tokony sahanina indrindra fa amin’ireny tamban-jotran’ny fizahan-tany ireny. Misy antenaina maro ny eto Madagasikara saingy tsy tokony hijanona hanantena fotsiny fa mila manatanteraka ihany koa.
13 juillet 2010 à 17:16
Mbola lavitra ezaka io ry ise a. Mbola tsy ananan’ny gasy ny toe-tsaina tia asa tsara sy asa vita tsara. Miainga any daholo nefa io.
Nisy AG an’ny mpitatitra malaza iray izay izao nahafantarana fa tsy dia nety loatra ny taona lasa. Marina fa teo ny krizy ary marina fa ny mpifaninana dia ao anaty vondrona matanjaka any ivelany, saingy miainga amin’ny fandraisana ny mpanjifa eo am-pamandrihana toerana sy tapakila io, mitohy amin’ny fahafahany mahita sarany mety aminy ary miafara amin’ny fandraisana eny an-tseranana sy ao anaty fitanterana mihitsy.
Mbola fototra ireo fa mila manatsara hatrany mba itomboan’ny mpanjifa, rehefa mitombo ny mpanjika afaka manatsara dia rehefa manatsara dia mitarika mpanjifa hafa io avy eo.
madagascar n’a participé à aucun concours , ni par sa compagnie aerienne ni par ses destination !!!!!